Sidee loo cusbooneysiiyaa Samsung Galaxy S2 ilaa Android 5.1.1 | Androidsis
Rumayso ama ha rumaysan, wali waxaa jira isticmaaleyaal badan oo sii wadaya adeegsiga mid ka mid ah terminaalka ugu wanaagsan ee Android ee Samsung ay sii deysay taariikhdii ugu dambeysay ee Android, terminal calaamadeeyay hor iyo gadaalba taas oo wali bixin karta adeeg u qalma nasiibkeeda milkiilayaasha. Terminalka aan ka hadlayno waa mid kale oo aan ahayn Samsung Galaxy S2 model GT-I9100.
Casharka soo socda ee wax ku oolka ah, mahadsanid asxaabta Horumarinta XDA, Waxaan ku tusayaa cSida loo cusbooneysiiyo Samsung Galaxy S2 ilaa Android 5.1.1 Lollipop. Haddii aad si sax ah u maqashay, «Cusbooneysii Sasmung Galaxy S2, nooca GT-I9100 wuxuu leeyahay Android 5.1.1 Lollipop ». Marka hadda waad ogtahay, haddii aad leedahay Samsung Galaxy S2 oo lagu iloobay khaanadda miiskaaga sariirta, waxaan kugula talinayaa inaad tagto oo aad samatabbixiso, ku dalac batteriga buuxa oo guji badhanka "Sii wad aqriso qoraalkan" maadaama shaki la'aan Waxaad nolol cusub siineysaa terminalkan weyn ee mar ku siiyay farxad badan.
1 Cusboonaysii 5-ta Juun Waa Muhiim !!
3 Faylasha loo baahan yahay
4 Sida loo cusbooneysiiyo Samsung Galaxy S2 ilaa Android 5.1.1 Lollipop
Cusboonaysii 5-ta Juun Waa Muhiim !!
Inkasta oo shuruudaha ay tilmaamayaan biligleynaya Rom kaliya iyada oo loo marayo Soo-kabashada TWRP, iyadoo la siiyay suurtagal la'aan helitaankeeda si loogu soo dejiyo qaab wanaagsan oo hadda jira, qaar ka mid ah dadka isticmaala boostada asalka ah ee lagu dhajiyay Horumarinta XDA waxay ka faalloodaan taas waxaa si guul leh looga cusbooneysiin karaa Soo-celinta CWM qaabka ugu dambeeyay ee la heli karo ee tan.
Marka la eego suurtagal la'aanta haysashada Samsung Galaxy S2, waxaan kugula talinayaa in qof kasta oo doonaya inuu isku dayo habkan biligleynaya CWM, ka hor intaadan sameynin nandroid gurmad dhammaan nidaamkaaga hadda jira haddii ay dhacdo birbirq xumo ama nooc kasta oo qalad ah, si aad awood ugu yeelatid inaad mar labaad soo ceshato xarunta oo aad uga tagtid sidii ay ahayd ka hor isku daygii aad ku iftiimin lahayd Romkan,
A Samsung Galaxy S2 International Model GT-I9100 taas oo waliba ay tahay inay noqoto Xidid iyo haysashada Soo-kabashada la beddelay.
Soo-kabashadaan wax laga beddelay waa inay noqotaa TWRP oo keliya iyo si gaar ah. Laga soo bilaabo xiriiriyahan Waxaan ku baraynaa sida loo cusbooneysiiyo Soo-kabashadaada qaabkeedii ugu dambeeyay ee la heli karo.
A nadroid keydinta dhammaan nidaamka qalliinka si ammaan ah loo ilaaliyo
Nuqul ka mid ah galka EFS.
Kaydinta dhammaan barnaamijyadeenna iyo xogta.
Awoodsiisay Qalabaynta USB ka xulashooyinka horumarinta.
Faylasha loo baahan yahay si loo gaaro himiladeena geesinimada leh ee aan ahayn midka kale cusbooneysii Samsung Galaxy S2 ilaa Android 5.1.1 Lollipop si rasmi ah shirkadda Samsung, waxay kaliya soo dejistaan ​​laba feylood oo isku dhafan oo qaabka ZIP ah iyagaana nuqulaya iyaga oo aan hoos ugu dhicin xusuusta gudaha ama dibedda ee Samsung Galaxy S2 ee aan u cusbooneysiin doonno Android 5.1.1 Lollipop.
Faylasha waa sida soo socota:
Rom Android 5.1.1 Lollipop ayaa u mahadcelinaya kooxda kooxda OctOS
Gapps Android 5.1.1. Nacnac.
Sida loo cusbooneysiiyo Samsung Galaxy S2 ilaa Android 5.1.1 Lollipop
Marka shuruudaha lagama maarmaanka ah la buuxiyo iyo inaad kujirto noocii ugu dambeeyay ee la heli karo ee TWRP Recovery, waxaan dib ugu bilaabi doonnaa qaabka Soo-kabashada oo waxaan raacnaa talaabooyinkan fudud:
Waxaan gujineynaa xulashada Tirtirka dibna Advanced oo waxaannu qabannaa dhammaan Masaxayaasha marka laga reebo midka u dhigma xusuusta gudaha ama dibedda ee terminalka, had iyo jeer waxay kuxirantahay halka aan ku leenahay faylasha Zip-ka si aan ugu iftiimino Romka la martigeliyay.
Waxaan gujineynaa xulashada Ku rakib oo waxaan shidnaa Android 5.1.1 Lollipop Rom.
Waxaan dib ugu laabaneynaa xulashada Ku rakib markan waxaan dooranaynaa zip-ka Gapps-ka.
Ugu dambeyntii waxaan gujinaynaa masax kaydka iyo dalvik y Dibudhiska Nidaamka Hadda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Samsung » (Dib loo cusbooneysiiyay) Sida loo cusbooneysiiyo Samsung Galaxy S2 ilaa Android 5.1.1 Lollipop
Orleans Adrian dijo
Waad salaaman tihiin. Sidee ufiican yahay qodobka ku saabsan sida loo cusbooneysiiyo Galaxy S2 Lollipop 5.1.1. Waxaan hayaa S4 Gt-i9500 oo wata Samsung Samsung 5.0.1 oo rasmi ah waxaanan u malaynayaa in kani yahay cusboonaysiintii ugu dambaysay ee Samsung ka samaysa terminalkan. Miyay sidan noqon doontaa? Mise waxaad u maleyneysaa in Samsung ay sameyn doonto cusbooneysiin kale?
Jawaab Orleans Adrián
Waxaan rumeysanahay in Samsung oo la socota Galaxy S4 ay halkan timid, nasiib wanaagse waxaad heshay Lollipop rasmi ah.
Hagaag, majiro wax tudhaale ah oo loogu talagalay i9100, oo ah gantaalka caalamiga ah ee s2, sidaa darteed farxaddeena ceelka, ilaa ay jirto mid kale oo la jaan qaadaya tusaalahan, kaas oo imika la sugayo warar cusub, waxaad dhigi kartaa cyanogenmod 12.1, a nooca uu sii daayay isticmaalaha lysergic acid, ee xda
Sidoo kale, anigu garan maayo waxa buug-gacmeedkan la allifay oo odhanaya waa inaad haysataa TWRP oo keliya, waxaan raadinayay TWRP i5 in ka badan 9100 saacadood mana ka muuqato meel kasta, ama qoraallo ka hor illaa 2.8.6.0 oo ah kii ugu dambeeyay ee usoo baxay moodellada sida S4 i9505
Sida muuqata waxaa jira isticmaaleyaal ka faallooda in si guul leh loogu cusbooneysiiyay CWM Recovery, iskuday inaad ka iftiimiso Rom-ka CWM oo aadan faallo ka bixin. Ka hor intaadan xasuusanin inaad sameyso nandroid ka soo kabashada haddii ay wax qaldamaan ama aysan ku habboonayn.
Waa hagaag, markaan arkay wixii aan arkay, waxaan u maleynayaa in qodobkaan la xiri karo, maadaama uusan waxtar lahayn, haddii aysan jirin ikhtiyaar loo isticmaalo dib u soo kabasho kale, laakiin waxa intaas ka sii badan, waxaan arkay xulashada iyo aaladaha inta kale, iyo dhammaanba iyaga waxaa jira noocyo caalami ah American s2, laakiin ma ahan mid caalami ah, taas oo ah tan xiisaha leh
Dhammaantiin waad salaaman tihiin ... Waxaan ku dhajiyay ROM-ka CWM S2 GT-I9100 illaa iyo hadda wax walba oo caadi ah: kamaraddu waxay sawirrada ku qaadataa HD, duubista fiidiyowga sidoo kale wuu sameeyaa; Si kastaba ha noqotee, ha u fulinin qalliinka sida lagu sharraxay Postkan laakiin halkii, raac tallaabooyinka sida saxda ah ee lagu sharraxay cusbooneysiinta Post-ka ee Lollipop 5.0.1 ee isla taleefanka gacanta. Dhanka kale, ROM-ku sifiican ayuu u socdaa laakiin xilliyada la dalbado xoogaa ayuu yara yaraadaa oo wax aad u qaldan ayaa ah in aanan xiri karin taleefanka; taasi waa, menu LOCK SCREEN (Settings + Security + Lock Screen) ma muuqdo
Dhamaan waad salaaman tihiin! Telefoonkaygu aad ayuu u kululaadaa batteriguna wuxuu u socdaa sida biyaha oo kale, ma jiraa qof garanaya sidaan tan ku xallin karo?
Waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado haddii ay tahay kaliya taleefankayga gacanta, ma cillad xagga qalabka ah baa mise cillad soo saar?
Salaan Habeennadii Moodalkan horey ayey u baxeen Cusboonaysii Boostada Ku dar bogsashada bogga Habeenki iyo GApps 5.1 Daacadnimo Edward Mahadsanid
linkiga soo dejinta ee llilipop-ka android ma shaqeynayo
waxaa jira nooc loo heli karo gantaalka s2 cirka i727
Jawaab Raul Bracho
Manuelm 32000 dijo
Waxaan ku qaatay usbuucaan dhammaadkiisa la'aan NANDROID ama wax 5.1.1 ah oo leh CWM. Waxaan haystay nooca saamiga 4.1.2 oo xidid ah waxaanan isku dayay inaan dhigo CM11 ka dibna CM 12 laakiin ma jirin waddo lagu helo gapps ama c-apps ku saabsan 20 isku day !, Marka waxaan ku burburiyey wax kasta mid ka mid ah OMNIROM iyo 5.1 gapps ah. . Hadda si wanaagsan ayey u socotaa in yar oo gaabis ah. Way kugu cuslaaneysaa. Barnaamijyadayda dib-u-dejinta ee barnaamijka TITANIUM PRO aniga igama qaadin qayb ahaan ama shaqsi ahaan ama anigoo u beddelaya xusuusta gudaha. Xiriirada waxaa horey loogu soo rogay PERPETUAL.
Waxay ii oggolaaneysaa inaan u isticmaalo barnaamijyo gaar ah oo la joojiyay dhowr bilood ka hor terminalkeyga, sida telefishanka casriga ah ee casriga ah, waana mid la jaan qaadi kara, mar labaadna shaqeynaya.
Markaad gaarto RAM, daaqada Suuqa Android ayaa soo baxaysa oo ah inaad xirto.
Waxaan ku maqli doonaa maxkamad dhawr maalmood, haddii ay i qancin weydana waan diidayaa haddii aysan wali guuleysanna, waxaan u dhigayaa 4.4.4.
Waxaan ubaahanahay xiriiriye si aan ugula soo dego ROM-kayga si uu u noqdo Lollipop-ka
Ku jawaab alexis avila
Waad salaaman tahay, waxaan sameeyaa su'aal. Waxaan hayaa nooca loo yaqaan 'Cyanogenmod 12 Lollipop version'. Ku cusbooneysii midka cusub ee ka socda Cyanogenmod 13 Marshmallow. Markii aan rabo inaan rakibo Gapps-ka waxaan helayaa qalad, oo aanan xusuus lahayn. Taleefanka gacanta waa la isticmaali karaa laakiin ma haysto faleebo. Xal kasta ???
Isla waxbaa igu dhaca aniga, waxaan isku dayay inaan rakibo Gapps maalmo. Ma jiraa qof garanaya halka laga soo dejinayo feylka iyo in taleefanku iyaga ka qaado marka la soo dejinayo?
Ku jawaab Cuestak
Waad salaaman tahay, waxaan haystaa Samsung S2 mana ii ogolaato inaan soo dejiyo soo kabsashadii ugu dambeysay, maxaan sameeyaa? Mahadsanid
kaalay halkan. dib u soo kabashada ayaa kuugu qiimo leh nacnaca. https://www.youtube.com/watch?v=Z9AAsfwnAI8
Ku jawaab Luismi
Waad salaaman tihiin, waxaan hayaa galaxy s2 gt-19100 oo arjiga snapchat-ka iyo kuwa kaleba isma waafaqsana markaan tago cusbooneysiinta software waxay ii sheegaysaa qaladka shabakada.
Su'aashaydu waxay tahay: sida kaliya ee lagu heli karo barnaamijyadan waa adoo sameysanaya nacnacan 5.1.1 casriyeyn ah mise waxaa jira qaab kale oo lagu sameeyo marka loo eego iibsashada mobiil kale.
Ku jawaab ZAS CA
Subax wanaagsan, kani wuxuu kaloo u shaqeeyaa Xusuusta II SGH-i317
Ku jawaab giovsim diaz
Fiid wanaagsan, Samsung S2-kaygu wuxuu i weydiiyaa inaan cusbooneysiiyo softiweerka, markaan siiyo cusboonaysiinta waxba kama qabanayso laakiin dib ayuu u bilaabmayaa markalena ogeysiiskii cusbooneysiinta barnaamijka ayaa soo muuqday. I caawi!
Ku jawaab yugledys
Hagaag, wax waliba waa qurux badan yihiin ... way u cadahay qofkasta oo fahmaya waxaad ka hadlayso ... dadka fudud ee ila mid ah waxaad moodaa inaad kuhadlaysay shiineys, aakhirka waa inaan iibsadaa mid cusub
Ku jawaab verokim
SIDA LUIS dijo
Iga raali noqo, waxaan hayaa qol Samsung ah oo aan haysto mudo laba sano ah oo aanan wax dhibaato ah soo bandhigin laakiin hada si lama filaan ah ayuu u damiyaa, sida ku cad waxaan ku dalacayaa 100 markii aan ka gooyona wuu damiyaa oo xayeysiinta Samsung ayaa soo muuqata Ma fahmin waxa dhaca? Ma i caawin kartaa, maxaan sameeyaa?
Sawirka muuqda waa sida kan daabacaada ku qoran oo leh "Shuruudaha tixgelinta la siinayo
Khariidadaha Nokia HALKAN waxaa lagu cusboonaysiiyay 'milyan' isbeddello ah